2mztaunggyi: Power Screen Capture 7.1.0 video record & Screen shot
Power Screen Capture 7.1.0 video record & Screen shot
ကျွှန်တော်တို့ destop ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားသမျှ မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ်းတခုပါ. လိုအပ်သူများဒေါင်းလော့ယူသွားလိုက်ပါ. Camera Record များကိုလည်းလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ key file လေးကောထည့်ထားပေးပါတယ်။ File Size 5MB
Rar password က 2mztaunggyi ပါ။
Power Screen Capture 7.1.0 download